Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa shaacisay geerida safiirkeeda Sergei Kuznetsov wuxuu ahaa diblomaasi muddo dheer, sida ku cad taariikhdiisa, wuxuuna kasoo shaqeeyay dalal kala duwan.
Haddana waa Safiir Ruushka ee midowgii Imaaraadka Carabta, waxaana geeridiisa si rasmi ah u xaqiijiyay Hogaamiyaha Isutagga Imaaraatka Carabta Sheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyaan tacsi u diraya madaxweynaha Vladimir Putin.
Danjire Sergei wuxuu ka soo shaqeeyay Safaaradda Ruushka ee Imaaraadka Abriil 4, 2019 kadib markii madaxweyne Putin u arkay inuu yahay shaqsi dardar gelin kara shaqada looga baahan yahay safaaradooda Imaaraadka.
Wuu dhashay 1953, waxna ku bartay Magaalada Moosko xarunta Ruushka, iyada oo qayb ka ah Ragga iyo Haweenka Tababar Diblomaasiyadeed oo door firfircoon ka ciyaaray.
Machadka Daraasaadka Xiriirka Caalamiga Moosko Wuxuu tagay 1976 wuxuuna shaqo ka bilaabay safaarada 1985, Soomaaliya & Jabuuti oo masuul ka ahaa dalkiisa sagaashameeyadii.
Qunsulka guud ee safaarada Ruushka ee Boqortooyada Jeddah ee Sacuudi Carabiya Wuxuu soo noqday ka hor intii aanu noqon safiirka dalka u fadhiya dalkaas Soomaaliya & Jabuuti sida ku xusan Taariikhdiisa.
“Sergei wuxuu haystaa in kabadan soddon sano oo shaqo diblomaasiyadeed ah, aqoon dheeri ah & khibrad. Waxaa aad looga yaqaan Bariga Afrika, Afrika, Bariga Dhexe iyo wadamada Carabta oo uu ku leeyahay xirfad iyo hufnaan. Shaqadii uu qabtay” Sidaana waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay Imaaraatka.
Waxay u badan tahay inuu Safiirku xanuunka keenay Covid-19 kaasoo galaaftay nolosha dad badan labo milyan Imaaraatka carabtu waa mid kamid ah wadamada ay ka dhacaan kiisaska ugu badan Fayruuska corona.
Xigasho: Gulf News / Axadle.
Lionel Messi oo xaalad adag ku jira
Laba qalad oo sababay guuldarada Barcelona